MyanCare | ဖြစ်ပွားတတ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ (အပိုင်း ၁)
by myatlynn | Dec 17, 2020 | Reproductive Health
ရေးသားသူ – Dr. Paing Thet Aung
လူသား တယောက်ဆိုရင် လိင်ကိစ္စ ဆိုတာ မထူးဆန်းလှပါဘူး။ လိင်ကိစ္စနဲ့ အတူ လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ တွေဟာလဲ မတော်တဆ ကြုံရလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကူးစက်ရောဂါတွေအကြောင်း သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေး ပြောပေးသွားပါ့မယ်။
ဘယ်လို ကူးစက်နိုင်သလဲ ?
အခြေခံအားဖြင့် လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါဆိုတာ အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံရာမှ ကူးစက်နိုင်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံရင်း ထွက်တဲ့ သွေး၊ သုတ်ရည်၊ အရည်တွေကတဆင့် ကူးစက်ပါတယ်။ တကယ်က လိင်မဆက်ဆံလဲ ကူးစက်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းရှိသေးတယ်။
မိခင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်၊ မွေးဖွားနေချိန်မှာ သန္ဓေသားကို ကူးစက်တတ်သလို ဆေးထိုးအပ်မျှသုံးရာမှ တဆင့် ကူးစက်တတ်ပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယား ပိုးတွေဖြစ်တဲ့ ကာလသားရောဂါပိုးတို့လို၊ ဆီးပူညှောင်ကျ ရောဂါပိုးတို့လို တွေကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်သလို ကပ်ပါးပိုးကောင်တွေ၊ လိင်အဂ်ါကြွက်နို့ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် ပိုးကောင်တွေကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်သင့်တယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်း နဲ့ မျိူးပွားအဂ်ါဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေကို တစုတစည်းထဲ တွေ့ရသလို ဘာလက္ခဏာမှ မပြတာလဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
၁) လိင်အဂ်ါ နဲ့ အနီးတဝိုက် ရောင်ရမ်းတာ၊ ရေကြည်ဘု ပေါက်တာ
၂) ဆီးသွားရင် နာတာ၊ ပူတာ၊ ကျင်တာ
၃) ဆီးသွားရင် သွေးရောင်ပါတာ၊ ပြည်ထွက်တာ
၄) အမျိုးသမီး အဂ်ါကထွက်တဲ့ အရည်မှာ အရောင်အဆင်းပါတာ၊ အနံ ပြင်းတာ
၅) အမျိုးသမီးအဂ်ါကနေ ရာသီချိန်မဟုတ်ဘဲ သွေးဆင်းတာ
၆) လိင်ဆက်ဆံတဲ့ အချိန်နာကျင်မှုကို ခံစားရတာ
၇) အဖျားတက်တာ၊ ချမ်းတုန်ပြီးဖျားတာ
၉) လိင်အဂ်ါ၊ ပေါင်ခြံတဝိုက် အကျိတ်တွေ ရောင်ရမ်းတာ၊ ကြီးတာ အစ ရှိသဖြင့် တွေ့ရှိရတတ်တယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြသနာတွေနဲ့ ပက်သက်ရင် ဘယ်အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်လဲ?
ပုံမှန်ဆို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဖို့ တော်တော်များများက ရှက်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီခဲ့ရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ချက်ခြင်းတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
၁) အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာ တခုခုပြတာ
၂) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှု ရှိတဲ့သူ၊ ဆက်ဆံဖော်များတဲ့သူတွေ
ဒါဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ သေချာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်တယ်။
ကိုကို၊ မမ၊ ညီလေး ညီမလေးတို့ အကုန် ရောဂါဘယ ကင်းစင်ပြီး ပြုံးပျော်ရွင်နိုင်ကြပါစေ။
Dr. Paing Thet Aung
ဒေါက်တာ ပိုင်သက်အောင် (Dr. Buddy) သည် ၂၀၁၄ တွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) မှ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန်ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။
ဘားလမ်း ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံ၊ National Health Network (NHN) နှင့် သာသန အနုအဂ္ဂ တောင်တန်းသာသနာပြု အဖွဲ့အစည်းတို့တွင်လည်း ကုသိုလ်ဖြစ်ဆရာဝန် အဖြစ် ၁ နှစ်ကျော်ကြာ လုပ်အာဒါနပြုခဲ့သည်။
ပါရမီ ဆေးရုံကြီးတွင်လည်း Medical Officer အဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး အရေးပေါ်ဌာန၊ အထူးပြုစုစောင့်ရှောက်ဌာန တို့တွင်လည်း ပညာဆည်းပူးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် အစိုးရ ဝန်ထမ်းဆရာဝန် (လက်ထောက်ဆရာဝန်/Assistant Surgeon) အဖြစ် ၁ နှစ်ကျော် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နှလုံးနှင့်သွေးကြောခွဲစိတ်ဌာန၊ အထွေထွေခွဲစိတ်ဌာန၊ အထွေထွေ သမားတော်ဌာနတို့တွင် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ များအထူးတလည် ဆည်းပူးခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင်လည်း Experienced General Practitoner တစ်ဦးအနေဖြင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။